WOWOW bhachi kicheni kunyura musanganiswa tap - br br nickel
musha / Kicheni Faucets / Pot Yekuzadza Kicheni Faucets / WOWOW Bridge Kicheni Sink Musanganiswa Mushonga - Brushed Nickel
WOWOW Bridge Kicheni Sink Mixer Tap - Brushed Nickel
Faucet chigadzirwa chechigadzirwa chatinoda kushandisa mazuva ese muhupenyu hwedu, chakatinakira kushandisa mvura. Pakati pavo, faini yekushambidzira ndiyo yakajairika chigadzirwa. kicheni faucet bhiriji dhizaini ine yakasarudzika chimiro, Sarudza iyi tap kuti uwane zvaunofarira.
Bridge khitchini sofa faucet
Zvikurukuru, iyo kicheni faucet ndeye Hardware chigadzirwa mukicheni yako yaunoshandisa zuva nezuva. Zvakawanda kangani nyangwe. Ikicheni sofa faucet inonyanya kukodzera kupombi mvura, kumwa mvura, kana kuchenesa kicheni yako. Ndokusaka iwe ungangoda kusarudza fenicha yekukicheni nekuchenjera kuti ikwane zvaunoda nenzira kwayo. Kwete chete nezve yako kicheni dhindaini, asi chaizvo chaizvo pamwe maererano ayo functionalities uye maitiro. Iyo bhenji rekicheni sofa faucet yeWOWOW inokupa yakasarudzika yakasarudzika kicheni faucet iyo inosangana nezvako zvaunofarira. Yayo sleek retro majoini anogadzira yakasarudzika French nyika maitiro mukicheni yako. Izvo zvinoita kuti kicheni yako dhizairo ive yakasiyana. Iyo yakareba uye yakanyoroveswa yakatemwa spout inopa kicheni yako neinobata inobata iyo kuti iipe iyo ne-wow-factor.
Iyo br br nickel yekupedzisa inopa inofadza uye vintage kutarisa kune yako kicheni décor. Pamwe chete nemagadzirirwo acho pachawo, iwo chaiwo ndeimwe yemhando yekicheni sofa faucet. Vagadziri veWOWOW vanoziva dhizaini yakashinga yekicheni kiyi. Iwe unogona kucherechedza izvozvo kubva kune zvese. Kicheni faucets yeWOWOW yakasarudzika kubva kune chero imwe kicheni yekunyura faucet. Vagadziri vanoshamisika, ivo vanoziva zvese nezvekugadzirwa kwekicheni, uye zvakanyanya kukosha ndezvekuti havarerutsi kukanganiswa kwemaficha ekicheni yekicheni mune chero kicheni décor. Ivo vane chokwadi chekuti ivo vanogona kuita mutsauko mune chero kicheni dhizaini, uye ita nepavanogona kuti vagone kuzadzisa icho wow-chinhu mukicheni yako zvakare.
Ergonomic bhiriji rekicheni sofa faucet
Nyaradzo ndizvo zvese. Sezvo iwe paunoshandisa yako bhenji kicheni kunyura faucet kakawanda pazuva, iwe unoda ergonomic dhizaini iri nyore kubata uye kudzora. Masheya anomhanyisa zvakanaka kuitira kuti adzore kuyerera kwemvura zviri nyore uye nenzira kwayo, ese ari kupisa uye anotonhora mvura. Nenzira iyi iwe unogona kusanganisa yako chaiyo tembiricha kupisa. Kunze kwezvo, iyo yakareba yakasarudzika spout inopa iyo inopesana-splatter uye inodonha-isina mvura ruzivo iyo inoita kuti mukicheni kunyura faucet kupfuura yakagadzikana kushandisa.
Iyo yemvura yemubhedha yekicheni kanyasi faucet zvakare yakagadziriswa nekuda kwekugadzira kwayo Neoperl ABS aerator. Haingori chete chishandiso ichi chinopa imwe yekumanikidza kuyerera kwemvura kuitira kuchengetedza mvura. Usarerutse kuti iwe unogona kuchengetedza pamusoro pe50% yemvura neiyi iripo kifaa. Kunyanya iwe unozoona izvi pane yako mvura dhiri. Kune rimwe divi ruzivo rwako rwemvura runogara rusina kuchinja. Hauzocherechedze kuti iwe unoshandisa mvura shoma, kunyanya kana mvura iripamusoro. Uye pakupedzisira iwe uchave neine rwizi rwakaoma kuitira kuti iwe unogona kushambidza zvinhu zviri nyore nejet ine simba, zvisinei nemvura nzira yauri kushandisa. Iwe unogona nyore kubvarura iyo ABS aerator pasina chero maturusi kuitira kuti ubvise kune inogona kuchenesa kana kuitsiva. Ziva kuchenesa aerator kazhinji sezvo mvura yakaoma masara anoungana pano. Haufanirewo kubvisa aerator pachayo kuti ishambidze kazhinji. Nekukurumidza swipe nemunwe wako, unogona kubvisa zvese zvakaoma zvakasara zviri nyore uye nyore.
Yakakura simbi bhenji mukicheni sofa faucet
Iyo bhenji kicheni sofa faucet yakavakirwa kubva kubhuronzi inonyanya kurwisa ngura uye inodzivisa kupisa kwakanyanya kunaka. Nekuda kweizvozvo bhiriji rekicheni sinyu faucet rakagadzirwa kuti rigare kwemakore mazhinji. Haisi chete iyo yekushongedza kwekicheni yekicheni inogadzirwa nendarira yakasimba. Zvakare ½ inch NPS yekubatanidza yakagadzirwa neiyo yakasimba-mhando yendarira. Unozviona paunobata bhiriji rekiyi iyi inocheka faucet mumaoko ako. Nekuda kwehuremu hwayo iwe unogona kuudza nekukurumidza kuti zvigadzirwa hazvina kuchengetwa kuti zvipe iwe zvakanyanya kukosha kwemari iwe yaunogona kuwana.
Iyo br br nickel pamusoro haingopi chete yako bhiriji yekicheni kunyura faucet nemafaro ekupedzisira, inodzivirirawo kicheni yako kunyura faucet. Nekuda kwe kunaka kwemhedzisiro, inokupa iwe anti-kukwenya uye isiri-yekudzora chiitiko. Yako bhenji kicheni sofa faucet haisi panjodzi yekukatyamara zvachose, uye inogona kuchengetwa yakanakira kwenguva yakareba. Iyo br br nickel pamusoro pekupedzisa inokupa iwe nekubatsirwa kwekuti zvigunwe zveprints hazvigare pamukicheni sofa faucet zvachose. Iwe uchave uine yakanaka uye yakachena-inoratidzika bhiriji yekicheni kunyura faucet nguva dzose.
Yakareba bhiriji rekicheni sofa faucet
Iyo bhenji yekicheni sofa faucet yeWOWOW inotaridzika sedhishi rekicheni yekicheni. Kwete pasina chinhu iyi bhiriji rekunyura sarupu faucet inoisirwa munzvimbo dzakawanda dzekutengeserana seanodakadza nzvimbo. Iyo bhenji yekicheni sofa faucet yakagadzirwa kuti imiririre runako rwechinyakare rwekutanga kwezana ramakore. Iyo bhenji yekicheni sofa faucet inopa yakajeka fashoni yeiyo tsika yakasarudzika kubhururuka kwekicheni yako décor. Kureba kwebhiriji rekitchen kunyura faucet anenge anenge 20 inches. Iyi yakareba yakavezwa silhouette inonyatso kubatsira zvakanyanya mukugadzirwa kwayo. Warranty bhiriji rekicheni kunyura faucet Mhando yeWOWOW haina kupikiswa. Nekuda kwekushandiswa kwemhando yepamusoro yemabhuru uye kupera kwakanyanya, bhenji rekicheni yekicheni rinogara kwenguva refu. Pamwe chete nenzira inonzwisisika yekugadzira kicheni faucets, WOWOW inoziva kuchengetedza mitengo yakaderera sezvinobvira. Nekuda kweizvozvo, WOWOW inogona kukupa iwe yakanakisa kukosha yemari. Isu tine chokwadi cheyedu-yemhando yepamusoro chiyero uye tinogona kukupa iwe isina kuvhiringidzwa 8-zuva rekudzoserwa mari vimbiso. Kana iwe ukazowana faucet iri nani nemutengo mumwe chete, kana kicheni yakafanana yekunyura tafura nemutengo wakaderera, tinokubhadhara zvizere. Pasina chero mibvunzo yakabvunzwa, uye pasina kunetsekana. Isu tine chivimbo mune yedu chigadzirwa uye tine chokwadi chekuti nemiwo muchadaro.
Sezvazvino nekicheni yese faucets yeWOWOW, iwe unovimbiswa yenguva refu yewarandi yenguva isingasviki makore mashanu. WOWOW inopfuura kupfuura ese maindasitiri zviyero, uye anodaro achidaro maererano neayo nguva yewarandi. Isu tinovimbisa anoshanda zvinoshamisa bhiriji kicheni kunyura faucet kweanenge makore mashanu. Iwe haufanirwe kutakura njodzi, asi isu tichadaro. Kana bhenji rako repabhenji rekunyura rikaitika kukuvara panguva ino, isu nemufaro tinoritsiva neimwe nyowani pasina kunetsekana. Iyi vimbiso kuzvipira kwedu kwauri.
Zvakanakira bhenji kicheni kunyura faucet muchidimbu:
• Yakasarudzika Antique retro chitarisiko
• Yakareba yakakwira arc dhizaini
• Yakashongedzwa brunch nickel kupedzisa
SKU: 2311501 Categories: Kicheni Faucets, Pot Yekuzadza Kicheni Faucets Tags: zambuko, Bronze Nickel, Mumwe Lever
Pasina padivi sprayer
WOWOW Pot Filler Faucet Pamusoro peStove Chrome